किन ओरालो झर्यो त शेयर बजार ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
किन ओरालो झर्यो त शेयर बजार !
काठमाडौं, २१ फागुन – साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४१ दशमलव ५६ अंक घटेको छ । बजार खुलेदेखि ओरालो लागेको नेप्से करिब एक घन्टापछि सम्हालिन खोजेको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सेयर बजार ओरालो लागेको सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको भनाइ छ ।
तर, बिक्रीको चाप बढेपछि बजार पुनः ओरालो लागेको हो । आइतबार नेप्से ओरालो लागेपछि वर्षकै न्यून बिन्दु १ हजार ३ सय ४ दशमलव ४३ मा पुगेको छ ।
डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सेयर बजार ओरालो लागेको सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीबाट सेयर बजारसम्बन्धी नकारात्मक टिप्पणी आउनु, देशमा विद्यमान तरलताको समाधानमा कुनै प्रकारको चासो नदेखाउनु र सरकारको पुँजीबजारप्रति स्पष्ट धारणा नहुनु निन्दनीय रहेको आइतबार नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले बताएको छ ।
त्यस्तै चिलिमे हाइड्रोपावर, माथिल्लो तामाकोसी र हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोजनाहरू अरुण, वरुण, हिमाल, खानीखोला, सानिमा माईजस्ता कम्पनीमा गरिएको लगानी कसरी अनुत्पादक भन्ने प्रश्न पनि संघले गरेको छ ।
साथै अनलाइन कारोबार शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन, बजार निर्माताका रूपमा व्यावसायिक संघ–संस्थालाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन पहल गर्ने, एनआरएनहरूलाई पुँजीबजारमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेलगायतका बजार विस्तारका कार्य हुनुपर्ने संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, सेयर धितोमा कर्जालाई पुनः ७० प्रतिशत कायम गर्ने, सेयर ऋणमा कायम गरिएको औसत भार १ सय ५० प्रतिशतबाट १ सय प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेजस्ता मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न संघले अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले भने बजार घट्नुमा खासै केही कारण नरहेको बताएका छन् ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ । यस दिन सो कम्पनीको ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । त्यसैगरी, नेपाल बैंक लिमिटेडको यस दिन २ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ । यस दिन कारोबारमा आएका १ सय ५१ कम्पनीमध्ये २ कम्पनीको मात्र सेयर मूल्य बढेको छ ।
४७ अर्ब ५ करोड सम्पत्ति घट्यो
‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स आइतबार ८ दशमलव ५८ अंक घटेर २ सय ७६ दशमलव ८० बिन्दुमा पुगेको छ । यस दिन लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेर १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ४७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कम हो । नेप्से ३ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत ओरालो लाग्दा कारोबार रकम भने खासै घटेको छैन । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम १० दशमलव ९४ प्रतिशत घटेको छ ।
यस दिन १ सय ५१ कम्पनीको ५ हजार ९ सय ४३ पटकको कारोबारमा ४८ करोड ३९ लाख ६७ हजार ५ सय ६ रुपैयाँबराबरको १३ लाख ११ हजार ९ सय ४८ कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन २४ दशमलव ६७ स्केलमा पुगेको छ ।
खरिद–बिक्री चाप मापन गर्ने यस आरएसआई ओभरबट जोनमा पुग्नुले बजारमा खरिदचापभन्दा बिक्रीचाप बढी रहेको संकेत गर्छ ।
विप्लवका नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ सहित ९ जना पक्राउ
दुबईमा नेपालीले टिकटिकसँगै होली मनाए
नेकपाको पार्टी एकता 'आकस्मिकरुपमा'